ATN: ဘလော့တထောင်၊ ဆောင်သင့်သည်များနဲ့ ရပ်တန့်သွားသောစာမျက်နှာများ
ဒီပို့စ်လေးမှာ ဦးဆုံးကောမန့်ပေးခွင့်ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်...
အကိုပြောပြထားတဲ့ အချက်အလက် အကုန်လုံးကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်...
ဘလောဂါတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စာဖတ်သူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ပေးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ...
အရေအတွက်ထက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ စာလေးတွေကိုလဲ မြန်မာဘလော့တွေကြားမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်...
ပြီးတော့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးဖို့အတွက် ကိုယ်ပေးလိုက်ရတဲ့ အချိန် စာဖတ်သူက ကိုယ့်စာတွေ ဖတ်ဖို့အတွက် ပေးလာတဲ့ အချိန်တွေအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ သုတ ဖြစ်ဖြစ် ရသဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကြည်နူးမှုလေးဖြစ်ဖြစ် ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်...
နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်ရင်ထဲက မွေးထုတ်ထားတဲ့ ဘလော့လေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး အဓွန့်ရှည်အောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ....
ဘဲအုပ်က တစ်ရာနှစ်ရာ ဖြစ်နေတာကိုလဲ ထောက်ခံပါတယ်...
ဒါတောင် အကိုက ညီမထက်စာရင် စာတွေ ပိုဖတ်နိုင်သေးတယ်.....
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အချိန်မရတာကြောင့် ဘလော့တွေပေါ်က စာတွေကိုသိပ်မဖတ်နိုင်သေးပါဘူး အကိုရယ် ကိုယ့်လင့်ခ်တွေထဲက အသစ်တက်တဲ့ပို့စ်တွေကိုပဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်....
ကျွန်တော်လည်းပျောက်သွားသူပဲဗျ ခုမှပြန်ဝင်လာတာ ဟိုးအရင်ကပေါ့လေ
ကျွန်တော်ဘလော့ လောက်ထဲယောင်ပေယောင်ပေလုပ်နေတုန်းက ကိုကြီးအောင်သာငယ် တို့ ကိုအိပ်မက်နက်တို့ နောက်ကိုမင်းယွန်းသစ် စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ ဖတ်နေကျဘလော့တွေ အကြိုက်ချင်းမတူကြပေမယ့်
ရင်ဘတ်တူသူခြင်းပေါ့လေ အဲ့လိုနဲ့နောက်တော့အကြောင်းတစ်ခု ကြောင့် ကျွန်တော်ပျောက်သွားပါတယ်။ တစ်နှစ်နီးပါးပါပဲ ကျွန်တော်ဝင်လာတာလဲ မသိလိုက်သလို ပျောက်သွားတာလဲ ဘယ်သူမှသိလိုက်ပုံမရပါဘူး ကိုကြီးအောင်သာငယ်ပြောသလိုဘလော့အုပ်က တစ်ထောင်နှစ်ထောင် ဖြစ်နေတာကိုးး))) ကိုကြီးဇင်ယော် အစ်ကိုတော် မောင်မျိုး ၊ ဥယျာဉ်မှုး(သို့)အစ်ကိုတော် ၀င်းမင်းဆန်း တို့ မတွေ့ရတော့ပါဘူး ကိုယ်သိတဲ့လူတွေပျောက်ပျောက်သွားပေမယ့် ကိုယ်မသိတဲ့လူတွေပိုတိုးပွားလာပါတယ် ဒီလိုနဲ့ အသစ်တိုးလာတဲ့ ဘလော့တွေသွားဖတ် အင်းဒီလိုနဲ့ ဘလော့လောကကြီးထဲ ယောင်လည်ယောင်လည်ဖြစ်နေတုန်းပါ.....။
ကျနော်တို့လည်း ဒီအကြောင်းကို တွေးမိနေတယ်..
ပျောက်သွားတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကိုလည်း သတိရမိတယ်.. သူတို့လည်း အားတဲ့အချိန်တွေမှာ စာပြန်ရေးကြရင် သိပ်ကောင်းမယ်နော်..
အခိုင်အမာ ရှိနေပြီးသား ဘလော့တွေ ပျောက်ဆုံးသလို ဖြစ်သွားတာကတော့ တကယ် နမြောစရာပါပဲ..
ဘလော့ တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့၊ အောင်မြင်လာဖို့၊ နေရာတစ်ခု ရလာဖို့ ဆိုတာ လွယ်မှမလွယ်တာပဲလေ.. ရင်းခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေက များကြီး..
အသစ်တွေ အများကြီး ပေါ်လာတာတော့ ဝမ်းသာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်.. ဘလော့ရွာကြီး ပိုစည်ကားလာတာပဲ..
နောက်တစ်ခု ကျနော့် အမြင်.. အသစ်တွေကို အားလုံး လက်တွဲခေါ်သင့်တယ်.. နည်းပညာပိုင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့ လိုအပ်နေတာကို အကြံပေးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကူညီသင့်တယ်..
တချို့တချို့တွေက အသစ်တွေဆို မဖတ်ချင်ကြဘူး.. အားမပေးကြဘူး.. နာမည်ရှိသူ၊ ရင်းနှီးသူတွေလောက်ပဲ သွားဖတ်ကြတယ်.. တကယ်ဆို အားလုံးက အသစ်တွေကနေ တက်လာကြသူတွေပဲလေ..
အသစ်တိုင်းက စမ်းရေးရင်း ရေးရင်း ဘလော့လောကထဲကို စဝင်လာသူတွေဆိုတော့ ချက်ချင်းကြီးတော့ ကဗျာကောင်း၊ စာကောင်းတွေ ထွက်ချင်မှထွက်မှာပေါ့.. အချိန်ဆိုတာကလည်း လိုသေးတယ်လေ..
ဘလော့ရောဂါရှိပြီးသူတိုင်းက အသစ်ဝင်ရောက်လာသူတွေကို အဲ့ဒီဘလော့ပိုး များများထည့်ပေးမှ.. ဒါမှ သူတို့ရောဂါမြန်မြန်ကြီးမယ်..း)
ပြောသာ ပြောရတာ ဒို့အစ်ကိုရေ.. ကျနော်တို့တွေလည်း တစ်ရက်တော့ ဒီလောကကနေ ပျောက်ကြရဦးမှာပဲလေ..
အကိုရေ ဟုတ်ပါတယ် အားလုံးက အလုပ်တွေကိုယ်စီနဲ့ဆိုတော့ အခက်အခဲလေးတွေ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အကိုတော်မောင်မျိုးနဲ့ ကိုမောင်ရင်ကိုတော့ အရမ်းလွမ်းနေမိဆဲပါ။ ဦးနာအောက်တောင်မှ မကူးလိုက်ရသေးတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိပါသေးတယ် တချိန်ပြန်ဆုံတွေ့နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ဟိုတစ်နေ့က ပြာသို ဆိုတဲ့ ဘလော့ခ်လေးတစ်ခုတွေ့တာ အဲဒါ မောင်မျိုး ဘလော့ခ် လို့ သိလိုက်ရတယ် လင့်ခ်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး အမှတ်တမဲ့ရောက်သွားတာမို့..
အသစ်လေးတွေ့တိုင်း အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ တော့ရောက်အောင်လာရတယ်..။
အစ်ကို့ရဲ့ မီးခိုးအူလာတဲ့ အတွေးအရေးလေးတွေ ကို သေသေချာချာ ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်...။
သတိပြုသင့်သမျှလေးတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံထောက်ပြပေးသွားတာ အ၇မ်းကောင်းပါတယ် အစ်ကို...။
လမ်းကြုံခဲ့သည်ရှိသော် ၀င်လာခဲ့ဖို့လည်း မျှော်လင့်မိပါတယ် အစ်ကို...။
မောင်မျိုးက http://pyartho.mmgenius.com/ မှာရှိတယ်အကိုရေ...အရင်ကလိုတော့ပို့စ်တွေသိပ်မတင်ဖြစ်တော့ဘူး
ဟုတ်ပ အကိုငယ်ရေ ..မီးခိုးအူတယ်ဆိုလို့ 
ဘလောဂ်လောကကြီးကို နောက်တမျိုး တင်စားချင်သေးတယ် ..
ဘလောဂါ တွေ မှာလည်း မဆုံးနိုင်တဲ့ ဘဝသံသရာ ရထားကြီးပေါ် စီးနင်းလိုက်ပါလာကြတဲ့ ခရီးသည်တွေလိုဘဲ ..
တချို့ က ခရီးတို စီးကြ ။ တချို့ က ခရီးရှည် ။
အနှေးရထား ၊ အမြန်ရထား ဆိုသလို အမျိုးအစားလည်းစုံပါ့။ ရထားပေါ်မှာလည်း ကြော်ငြာစုံ နဲ့ ။ ပြီး ကိုယ့်အကြောင်း သူ့ အကြောင်း စကားလက်ဆုံ ပြောကြ နဲ့ ။ရှိတာလေးထုတ်ကျွေးကြနဲ့။ခင်သွားကြတော့လည်း နေရပ်လိပ်စာ အပြန်အလှန်ပေးကြ နဲ့ ။ ဆင်းရမဲ့မှတ်တိုင်ရောက်တော့လည်း .......
ကိုယ်ဆင်းရမဲ့မှတ်တိုင် ဘယ်တော့ရောက်မလဲ တော့ မသိသေးဘူး ... :)
(အဲ .. မေ့လို့ရထားလက်မှတ် မဝယ်ဘဲ စီးလာမိတယ် .. လက်မှတ်စစ်လာရင် ပုန်းနေအုံးမှ )... :((
ဘလော့တွေကို စ လည်ဖြစ်တုန်းကတော့ နာမည်လှတာကြည့်ပြီးလည်ဖြစ်တယ်..
နောက်တော့ အကို့လစ်စ်ထဲက ဘလော့တွေလည်ဖြစ်တာ အခု နှစ်ဆယ်လောက်ရှိမယ်..
အခုတော့ အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ အကို့ရဲ့  ကွန်မန့်မှာတောင် ဦးဆုံးမမန့်နိုင်ယုံမက ( ဦးဆုံး နောက်ဆုံး ဘယ်လိုဘဲ မန့်ရမန့်ရ ကိစ္စမရှိ )တနေ့ကိုလည်ဖြစ်တာ ၁၀ ခုတောင်မပြည့်ဖြစ်နေရောပေါ့...ကိုယ်စီကအလုပ်တွေနဲ့ဆိုတော့ ရေးသူဖတ်သူ ဒီလိုပါဘဲအကိုကြီး...ဘလော့ရေးတဲ့အတွက် ပိုက်ပိုက်များများ ရရင်ကောင်းမယ်လို့တောင် ညီမတွေးမိသေးတယ်....
ကိုရင်. ၀င်ဆွေးနွေးတာလေး သဘောတူပါတယ် အကိုရေ..
ကိုယ်နှစ်သက်ရာ စိတ်ဝင်စားရာ ဘလော့လေး တွေကို ဆိုဒ်ဘားမှာ တင်ထားသူတိုင်း တကယ်ကျေးဇူးတင်မိတယ်
အဲဒီလို တင်ပေးထားတာမို့လို့ပဲ ကိုယ်တိုင်လဲ ဘလော့သစ်တွေ မသိဖူးသေးတဲ့ ဘလော့တွေရောက်ဖြစ်တာပါ
ကိုယ်တိုင်တော့ ကိုယ့်ဆိုဒ်ဘားမှာ ရှိတဲ့ ဘလော့တိုင်းလဲ မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး
ဒါပေမဲ့ စိတ်ဝင်စားသူတွေကလစ်လုပ်ပြီး ဖတ်ဖြစ်အောင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဘလော့လေးတွေကို link လုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်နဲ့ ခင်မှ. သိမှ ဘလော့ဂါ ရင့်မာ ကြီးတွေမှ ရယ်လို့ သဘောမထား ဖြစ်ခဲ့ဘူး
ကိုယ့်ရင်ထဲက စီးကျလာတာတွေ ကိုယ်ဖန်တီးဖြစ်တာတွေ လာရောက်ပြီး မျှဝေခံစားပေးသူတွေ ရှိနေတာမို့ စိတ်ပင်ရကျိုး နပ်တယ်လို့ ထင်နေမိတယ်
နောက်ထပ် ပို့အသစ် လေး မထွက်လာတော့မဲ့ အချိန်ဟာ ဘယ်အချိန်လဲ လို့ မသိပေမဲ့
ခု ချိန်ထိတော့ ရင်ခုန်ခြင်းတွေ ခံစားချက်တွေ မျှဝေချင်စိတ်တွေနဲ့ ရှင်သန်ဆဲ ..
အများကြီး ပြောချင်တယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်မလည်း အချိန်ရထားကြီးကို ပြေးလွှားလွှားနဲ့ စီးနေတဲ့ သူတယောက်ဆိုတော့ ရထားက ရှေ့မှတ်တိုင်မှာ ဆင်းရမှာမို့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်လို့ ပို့စ်ကိုရော မှတ်ချက်တွေမှာ ရေးထားတာကိုပါ အသေအချာ ဖတ်သွားပြီး အသိအမှတ်ပြုကြောင်းနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရကြောင်းပဲ ပြောသွားပါရစေ။
နံပါတ် ၁ နဲ့ ၂ အယူအဆကို ထောက်ခံပါတယ်။ ပြီးတော့ စာဖတ်သူရဲ့ မုဒ် လည်းလိုသေးတယ်ထင်တယ်။
ဈန်မ၀င်ဘဲနဲ့ အသစ်တင်လို့သွားတယ် ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့မတူရင် မဖတ်တော့ဘူး။ မုဒ်လေးရှိနေရင်တော့ ဘာရေးရေးထားထားဆုံးအောင်တော့ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ဆိုဒ်ဘားက လစ်တွေ တချို့ကတော့ မကီ ပြောသလို ရထားပေါ်ကနေဆင်းသွားကြတယ်။ တချို့ကတော့ ဆင်းသွားတယ် ဒါပေမယ့် တွဲပြောင်းစီးကြတယ်။ လင့်အသစ်ပေါ့ အလိုအခါကြတော့ လင့်အဟောင်းလေးတွေလည်း ကျန်နေတတ်တယ်ထင်တယ်။
ဒီအပါတ်ထဲ ပစ္စဖိတ် အနောက်ဖက်ခြမ်း မီးခိုးအူနေတာ
ကယ်လီဖိုးနီးယား တောမီးကြောင့် မဟုတ်ပဲ ကိုအောင့် လက်ချက်ကိုး....... မီးခိုးအူတာ တွေ့တိုင်း ဒီ .. လာလာကြည့် အုန်းမှ။
1 Sep 09, 08:28 PM
ကိုဟန်: ဟုတ်ပါ့ အကိုရယ် ကျနော်လဲသဘောတူပါတယ် အကို၇ဲ့ အတွေ့ မီးခိုးကို ကျနော်တို့ အရင်က စာတစ်မျက်နှာရေးရဘို့အတွက် ငွေကုလူပန်း အချိန်တွေကုန်ကျဘူးတယ်နော် 56k လေးနဲ့ပေါ့ အခုတော့လဲရယ်စရာ
ဘလောဂါကြီးများရဲ့ အမြင်တွေ မေတ္တာတွေ စာပေ ကို မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ထားတွေ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်ရပ်တန့် ပျောက်ကွယ်သွား
ကြတဲ့ ဘလောဂါတွေကို လွမ်းနေကြတာ
တွေဟာ အင်မတန် ပီတိဖြစ်စရာကောင်းပါ
တယ် .... သူတို့ တွေကို သတိတရ ရှိနေ
တယ်ဆိုတာ သိများသိရင် ဘယ်လောက်
တောင် ပျော်နေကြမလဲဗျာ .... အသစ်တွေ
ကို ဝမ်းသာ အဲလဲ ကြိုဆိုကြတာလည်း မင်္ဂလာ တစ်ပါးပါ အစ်ကို့ ရဲ့ အတွေးအမြင်
လေး ကို ဖတ်ရှုရင်း မှတ်သားစရာတွေနဲ့အတူ ပြန်သွားပါတယ်
တို့ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်မရှိပေမဲ့ ရွာလည်ပြီး စာလိုက်ဖတ်တဲ့ ဘလော့ဂ်အာဂန္တုပေါ့ဗျာ၊ တို့ကြိုက်တဲ့ဘလော့ဂ်မျိုးက နောင်ဂျိန်ချတဲ့ဘလော့ဂ်မျိုးဗျ၊ အထူးသဖြင့် မွေးဌာနီ
မှာ ကြေးပြားတွေရင်ဘတ်ပေါ်တသီတတန်းချိတ်ပြီး ဘဝရှင်မင်းတရားဘွဲ့ကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်မှည့်၊ ကျွန်သဘောက်လေးတွေမွေး၊ ပြီးရင်အဲဒီကျွန်လေးတွေကို အရိုးအရင်းလေး
ပစ်ပေးပြီး ဘလော့ဂ်ထောင်ခိုင်း၊ ဘုန်းတော်ဘွဲ့တွေသီကုံးခိုင်းတဲ့ဟာတွေကို နောင်ဂျိန်ဆော်နေတဲ့ ဘလော့ဂ်မျိုးတွေကိုကြိုက်တာ။ အဲလိုမျိုးဘလော့ဂ်ကလည်း ရှားရှားပါးပါး
လေးငါးခုလောက်ပဲရှိတာကိုး၊ သူတို့လည်း ရေးတတ်လိုက်တာဗျာ၊ တခါတလေဖတ်ရတာ ငယ်ထိပ်ကို ပိဿလေးနဲ့ထုသလား အောက်မေ့ရတယ်။ သူတို့အရေးသားများ ဖတ်လိုက်ရရင်
တို့မှာအစာကြေရင်ချောင်သဗျ။ ခုတော့ သူတို့လဲ ပေါ်မလာအတော်ကြာ ဖြစ်နေတော့၊ တို့မှာ ဦးချိန်တီလျက်ဆားလေးနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေရတယ်ဗျာ။ သိတော့သိပါတယ်၊ ဒီအရေး
အသားလေးနဲ့တော့ တောင်လုံးကြီးကို မဖြိုနိုင်မှန်း၊ သို့ပေမဲ့ အားတော့တက်မိတာပေါ့။ သူတို့လဲ မနှေးအမြန် ပြန်လည်နောင်ဂျိန်ပလေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းနဲ့။
ကိုအောင်သာငယ်ရေ.. ဒီနေ့ညနေ အွန်လိုင်းခဏ၀င်လိုက်တော့ ဦးနော်က ဒီမှာဖတ်သွားကြည့်ဆိုပီး ပြလိုက်လို့ ရောက်လာတာ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျောက်သွားခဲ့ပေမယ့် ဒီစာလေးကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ခဏ ၀မ်းနည်း ၀မ်းသာဖစ်သွားတယ်။ အမှတ်တရရှိနေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြန်ရေးဖို့ အတွက် ကိစ္စ တစ်ခု မပြတ်သေးလို့ အချိန်ယူနေရတာပါ။ ဘာပဲဖစ်ဖစ် ..ဘာတွေဖစ်သွားလဲတောင်မသိတော့ဘူး။ အစ်ကို့စာလေးဖတ်ပီး ဟတ်ထိသွားတယ်။
စာရေးဆရာတွေလို ကလောင်ခွဲရေးထားသူဆို ပိုဆိုးမယ်နော်... အချိန်တွေပိုကုန်မယ် ဘာပြောပြော
ဘလော့ဂ်ဂါတွေများလာတာတော့ ကောင်းတယ် ...
ကျနော်က အခုမှဘလော့ထဲကိုစ၀င်တာဆိုတော့ ဘာမှကောင်းကောင်းသိပ်မသိပါဘူး အကိုအခုလိုရေးပြရှင်းပြထားတော့ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ် အခုပို့စ်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါဘဲဗျာ
ကျွန်တော်တို့ လို ဟိုဝင်ဒီထွက်ကောင်တွေလဲရှိသေးတယ်
1 Sep 09, 11:05 PM
ကိုရင်ညိန်း: ရောက်တယ် အကိုကြီးရေ .. တိုက်ဆိုင်တယ်ဗျာ.. ကျနော်တောင် ဘလောက်တတ်ရာရာ ဘာညာ ကွိကွ ၂ ..ဆက်ရေးနေတုန်း ဗျ.. အကိုကြီး အဆင်ပြေပါစေဗျာ အဟေးဟေး
2 Sep 09, 10:04 PM
ဆူးရင့်: ကိုအောင်သာငယ်ရေ .... ကျွန်တော် ရောက်လာပြီး ဘလော့တထောင်၊ ဆောင်သင့်သည်များနဲ့ ရပ်တန့်သွားသောစာမျက်နှာများကို ဖတ်သွားပါတယ်။ သဘောချင်းလည်း တိုက်ဆိုင်ပါတယ်။
ကိုအောင်သာငယ်က ဘလော့တွေ အတော်ဖတ်နီုင်တာပဲ
ဟုတ်တယ် ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုက်တာတွေကိုတော့ ပိုနှစ်သက်တယ်..
အထူးသဖြင့် ကိုအောင်သာငယ် အမြဲရှယ်တတ်တဲ့ စာကောင်းတွေဆိုလည်း ဖတ်ဖြစ်တယ်။
အစက ဖတ်နေကျမှပျောက်သွားတယ်.အခု ပြန်လုပ်ပေးနေတယ်..အဲ့အတွက်ကျေးဇူး